पार्टी र सरकार नै ‘ट्रयाक आउट’- विचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०७ औँ जन्मजयन्ती सोमबार देश/विदेशमा विभिन्‍न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । कोरोना महामारीका कारण विगतमा जस्तो औपचारिक कार्यक्रमको भने आयोजना गरिएको छैन ।
काठमाडौंको दरबार हाइस्कुल, रानीपोखरीस्थित भानुभक्तको प्रतिमामा माल्यार्पण गरिएको छ । नेपाल शिक्षा परिषद् र भानुभक्त प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा साहित्यप्रेमीहरुले रामायणका श्‍लोक वाचन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय विभूति आदिकवि आचार्यको जन्म वि.सं. १८७१ साल असार २९ गते तनहुँको चुँदी रम्घामा भएको थियो । संस्कृत भाषामा रहेको रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका भानुभक्तका प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, वधूशिक्षालगायत कृतिहरु चर्चित छन् ।
भानुभक्तको निधन वि.सं. १९२५ साल असोज ६ गते भएको थियो । भानुभक्तको जन्मजयन्ती भारतको दार्जीलिङ, सिक्किम, असमलगायत नेपालीभाषी रहेका धेरै स्थानमा पनि मनाइन्छ ।
प्रकाशित : असार २९, २०७७ ०९:३४